Lovantsofina Info. About. What's This?
Zakaria (raini Joany)
Evanjely armeniananny Fahazazana
Filemona avy any Kolosia
Ondry nania ka hita indray
Konsily fahefatra tao Konstantinopoly
Epistily ho anny Hebreo
Ora (tanana taminny Andro Taloha)
Ny lovantsofina am-bava dia fomba itahirizana sy ampitana ny tantara, ny lalàna, ary literatiora amin ny taranaka mifandimby eo amin ny fiarahamonin ny olombelona izay tsy manana abidy ho enti-manoratra na misafidy ny tsy hampiasa soratra na voatery tsy mampiasa izany. Matetika no heverina ho isan ny kolontsaina nentim-paharazan ny vahoaka iray ny lovantsofina am-bava.
I Simona Petera na Simona Piera dia iray aminireo mpianatri Jesosy roa ambinny folo lahy. Hafohezina aminny hoe Petera na Piera fotsiny io anarana io matetika. Jiosy na Jody avy any Betsaida any Galilea i Petera. Μpanjono no asany. Araka ny lovantsofina dia izy no nanoratra ny Epistily voalohany sy faharoani Petera. Ny lovantsofina katolika koa dia manao azy ho ilay nanorina ny Eglizy katolika voalohany sy papa voalohany.
I Joda Zelota izay atao hoe koa Aday na Tadeo avy any Edesa dia mpiantri Jesosy. Araka ny lovantsofina dia nitory ny vaovao mahafaly tany aminny faritri mesopotamia, indrindra tany Edesa sy any aminny Fanjakani Armenia. Tsy ekenny Fiangonana katolika anefa izany filazana fa i Joda Zelota no nampiely ny vaovao mahafaly tany izany. Tsy mazava tsara ny amini Joda Zelota satria mifanipaka ireo lovantsofina momba azy. Ny lovantsofina tatsinanana dia manao azy ho nanorina ny Fiangonana ao Edesa ka isanizany ny Fiangonana nestoriana. Ny lovantsofina armeniana kosa milaza fa izy no nanorina ny Fia ...
Ny hazo fijaliana na hazofijaliana na lakroà dia eva amantarana ny fivavahana kristiana amin ny ankapobeny. Heverina ho endriky ny fitaovana nanomboana ani Kristy ny hazo fijaliana mitanam-bokovoko. Tamin ny taonjato faha-4 no lasa eva sy famantarana ny fivavahana kristiana ny hazo fijaliana mitanam-bokovoko, izay noraisin ny emperona Konstantino Lehibe, araka ny lovantsofina, amin ny endrika krisma ☧. Tamin izany vanimpotoana izany sy taorian ny nahitan ny renin ny emperora ny relikan ny "Hazofijaliana Marina" heverina fa ilay nanomboana an i Kristy, araka ny lovantsofina, no nanombohan n ...
Evanjelista na Evanjelistra no iantsoana ireo olona nanoratra ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly efatra ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ny roa ihany no anisanny Apostoly roa ambinny folo: i Matio sy i Joany. I Marka sy i Lioka dia tsy isanny Apostoly roa ambinny folo. Ny teny hoe evanjelista dia midika hoe "olona mpampiely vaovao mahafaly".
Ny anarana hoe Joda na Jodà dia anarana be mpitondra. Ao aminny Baiboly sy ao aminny lovantsofina Kristiana dia maro ny olona mitondra io anarana io. Ao aminny Testamenta Taloha: I Joda na Jodà zanaki Jakoba Ny Fanjakani Jodà izay atao hoe Jodà na Joda ihany Ny fokoni Jodà na Joda Ao aminny Testamenta Vaovao sy ny lovantsofina kristiana: Ny mpanoratra ny Epistilini Joda Joda Tadeo na Jodasy Tadeo Joda Zelota na Jodasy Zelota izay atao hoe koa Tadeo avy any Edesa
Ny lovantsofina dia ny fampitana mitohy ny singan-kolontsaina iray na maro mandritra ny tantara hatraminny zava-mitranga mpanorina na hatraminny zava-nitranga taminny fotoana lasa lavitra dia lavitra. Izany lova tsy azo tsapain-tanana izany dia mirakitra ny maha izy azy ny vondronolona iray, ka mety ho izany no namorona ny foko iray. Ny lovantsofina dia fitadidiana ny zavatra izay nisy ka tokony hampitaina aminny taranaka mandimby sady hohateveninizy ireo. Ny lovantsofina dia mety am-bava na efa voasoratra.
Ao aminny fivavahana kristiana dia atao hoe lovantsofina na lovam-pinoana hoy ny Katolika malagasy ny fanambaràna mitohy ny Vaovao Mahafaly amin ny Fiangonana aminny alalan ny fifandimbiasan ny apostoly lovam-pinoana apostolika. Raha mampitovy lanja ny lovam-pinoana amin ny Soratra Masina ny Katolika sy ny Ortodoksa, ny Protestanta kosa dia tsy mandray ho tenin Andriamanitra afa-tsy izay voasoratra ao amin ny Baiboly jereo: Sola scriptura.